न्यूजीलैंड भ्रमणकर्ता भिसा आवेदन, न्यूजीलैंड पर्यटक ईटीए भिसा
न्यूजील्याण्ड पर्यटक भिसा
न्यूजील्याण्ड ईटीए अवलोकन
न्यूजील्याण्ड भिसा प्रकारहरू
आवेदन फारम गाइड
क्रूज शिप द्वारा आउँदैछ
गतिविधिहरू NZeTA मा अनुमति छ
अमेरिकी नागरिकका लागि न्यूजील्याण्ड ईटीए
EU नागरिकका लागि न्यूजील्याण्ड ईटीए
क्यानडाली नागरिकका लागि न्यूजील्याण्ड ईटीए
ब्रिटिश नागरिकका लागि न्यूजील्याण्ड ईटीए
फ्रान्सेली नागरिकका लागि न्यूजील्याण्ड ईटीए
पहिलो पटक आगन्तुक
न्यूजील्याण्ड जीवन शैली
मौसम र मुद्रा जानकारी
माओरी संस्कृतिको स्वाद
माउन्ट कुकको अन्वेषण गर्दै
न्यूजील्याण्ड मा शीर्ष समुद्र तटहरू
रिंग अनुभव को प्रभु
एबेल तस्मान राष्ट्रीय उद्यान
सर्वश्रेष्ठ ऑकल्याण्ड रेस्टुरेन्ट
सब भन्दा मन पराउने NZ खेलहरू
न्यूजील्याण्ड मा शीर्ष एडवेंचर्स
न्यूजील्याण्ड मा स्कीइ
चराहरू र पशुहरू
न्यूजील्याण्ड रोड यात्रा
अद्वितीय न्यूजील्याण्ड फूडहरू
चथम टापु पर्यटन गाइड
अकल्यान्डमा २ H घण्टा
NZeTa सामान्य प्रश्न
न्यूजील्याण्ड ईटीए भनेको के हो?
मलाई न्युजील्याण्ड ईटीए चाहिन्छ?
NZeTA बनाम न्यूजील्याण्ड भिसा
क्रूज जहाज द्वारा आउँदैछ?
NZ eTA कति लामो हो?
म कति बेर बस्न सक्छु?
सबै बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू »
न्यूजील्याण्ड टूरिस्ट भिसा जानकारी सबै आगन्तुकहरूको लागि न्यूजीलैंडको लागि छोटो अवधिको यात्राका लागि
१ अक्टूबर २०१ 1 बाट, भिसा फ्री देशहरूबाट आएका पर्यटकहरू पनि चिनिन्छन् भिसा छूट देशहरु मा लागू गर्नु पर्छ https://www.new-zealand-visa.co.nz न्यूजीलैंड भिजिटर भिसाको रूपमा एक अनलाइन इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्रमाणीकरणको लागि।
जब तपाइँ एक बनाउनु हुन्छ न्यूजील्याण्ड पर्यटक भिसा आवेदन अनलाइन, तपाईं एकल लेनदेन मा अन्तर्राष्ट्रिय आगन्तुक लेवी र इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण तिर एक सानो शुल्क तिर्न सक्नुहुन्छ। NZ eTA (न्यूजील्याण्ड इलेक्ट्रोनिक यात्रा प्राधिकरण) मा न्यूजील्याण्ड प्रवेश गर्न तपाईंसँग भिसा छूट भएका देशहरू मध्ये एकबाट वैध पासपोर्ट हुनै पर्छ।
तपाइँको लागि न्यूजल्याण्ड भ्रमण गर्ने भिसा अंकहरू:
कृपया सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको राहदानी तीन महिनाको लागि मान्य छ न्यूजील्याण्ड प्रवेश को मिति मा।
तपाईसँग हुनु पर्छ वैध इमेल ठेगाना इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण प्राप्त गर्न।
तपाईंसँग हुनु पर्छ अनलाइन भुक्तानी गर्न क्षमता क्रेडिट / डेबिट कार्ड वा Paypal जस्ता विधिहरूको साथ।
तपाईंको भ्रमणको उद्देश्य हुनुपर्दछ पर्यटन सम्बन्धित.
चिकित्सा भ्रमण न्यूजील्याण्ड छुट्टै भिसा चाहिन्छ जुन न्यूजील्याण्ड टुरिस्ट भिसा (NZ ईटीए) लाई कभर गर्दैन, सन्दर्भित गर्नुहोस् न्यूजील्याण्ड भिसा प्रकारहरू.
यदि तपाई न्यूजल्याण्ड स्थायी निवासी हुनुहुन्छ वा अष्ट्रेलियाली राहदानी धारक (नागरिक) हुनुहुन्छ भने तपाईलाई न्युजील्याण्ड भिसा भिसाको आवश्यकता पर्दैन। अस्ट्रेलियाई स्थायी बासिन्दाले जे होस्, न्युजील्याण्ड टुरिस्ट भिसा (NZ eTA) को लागि आवेदन गर्नु पर्छ।
एकल भ्रमणको लागि न्युजील्याण्डमा तपाईको बसाई 90 ० दिन भन्दा बढि हुनु हुँदैन.
आपराधिक सजाय हुनुहुन्न.
विगत हुनु हुँदैन निर्वासनको इतिहास अर्को देश बाट
यदि न्यूजीलैंड सरकारसँग विश्वास गर्न पर्याप्त कारणहरू छन् कि तपाईंसँग अपराधहरू छन् भने, त्यसोभए तपाईंको न्यूजील्याण्ड पर्यटक भिसा (NZ eTA) स्वीकृत हुन सक्दैन।
न्यूजील्याण्ड टुरिस्ट भिसाका लागि कागजातहरू आवश्यक छ
तपाईको न्यूजल्याण्ड अनुप्रयोगको लागि दृश्य र पर्यटनको उद्देश्यका लागि निम्न तयारी आवश्यक छ।
भिसा योग्य देशहरूबाट पासपोर्ट।
90 ० दिनको वैधता राहदानी प्रविष्टि को मिति मा।
दुई खाली पृष्ठहरू ताकि कस्टम अधिकारीले एयरपोर्टमा स्ट्याम्प गर्न सकून्। त्यो नोट गर्नुहोस् हामीलाई तपाईंको राहदानी देख्न आवश्यक पर्दैन वा एक स्क्यान प्रतिलिपि छ वा तपाईंको पासपोर्टको कुरियर प्राप्त गर्नुहोस्। हामीलाई केवल तपाईंको पासपोर्ट नम्बर आवश्यक छ, यसको समयावधि मिति।
तपाईंको नाम, बीचको नाम, थर, जन्म मिति राहदानीमा उल्लेख गरे जस्तै ठिकसँग मेल खाउ अन्यथा एयरपोर्ट वा बन्दरगाहमा चढ्ने काम अस्वीकृत हुन सक्छ।
क्रेडिट / डेबिट कार्ड वा Paypal खाता विवरण।
कसरी न्यूजील्याण्डको भिसा भिसा प्राप्त गर्ने
तपाईं एक सरल, सीधा र दुई मिनेट अनलाइन प्रक्रिया मार्फत अनलाइन आवेदन गर्न सक्नुहुनेछ न्यूजील्याण्ड एस्टा आवेदन फारम तपाईंको न्यूजील्यान्ड इलेक्ट्रोनिक यात्रा प्राधिकरण (NZ eTA) प्राप्त गर्न।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले जाँच गर्नुभयो तपाइँको न्यूजील्याण्ड eTA का लागि योग्यता.
यदि तपाईं एक बाट हुनुहुन्छ भिसा छूट देश त्यसो भए तपाईं ईटाको लागि यात्राको मोड (एयर / क्रूज) लाई ध्यान नदिई आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाका नागरिकहरू, क्यानाडा नागरिकहरू, जर्मन नागरिकहरू, र युनाइटेड किंगडमका नागरिकहरू गर्न सक्छन् न्यूजील्याण्ड ईटीए को लागी अनलाइन आवेदन दिनुहोस्। युनाइटेड किंगडमका बासिन्दाहरू Zealand महिनाका लागि न्यूजीलैंडको ईटीएमा बस्न सक्दछन् जबकि अरू6० दिनका लागि।
कृपया तपाईंको उडानको advance२ घण्टा पहिले न्युजील्यान्डको लागि आवेदन गर्नुहोस्।
NZeTA अनुप्रयोग लागू गर्नुहोस्
न्यू ज़ील्याण्ड ईटीए
नयाँ ZEAland ETA अवलोकन
NZeTA आवेदन फारम
NZeTA ELIGIBILE COUNTRES
NZeTA VISA WAIVER देशहरू
NZeTA VISITOR जानकारी
आवेदन फाराम गाइड
पहिलो पटक भ्रमण गर्नेहरू
सीमा सुरक्षा जाँच गर्नुहोस्
NZeTA बनाम नियमित VISA
गतिविधि NZeTA मा अनुमति प्राप्त
क्रुस जहाजमार्फत आउँदैछ
पहिलो पटक भ्रमण गर्ने
नयाँ ज़िलेन्ड जीवन शैली
CRERENCY and WEATHER INFO
मौरी संस्कृतिको स्वाद
नयाँ ज़ील्याण्डमा उत्सवहरू
एक्सप्लोरिंग माउन्ट कूक
अद्वितीय नयाँ ज़िलेन्ड फूडहरू
CHATHAM टापु मार्गदर्शन
दश महान चाल
शीर्ष १० समुद्र किनार
रिंग्स अनुभव को प्रभु
सर्वश्रेष्ठ अकल्याण्ड रेस्टोरन्टहरू
धेरै मनपर्दो खेलहरू
NZ मा शीर्ष विज्ञापनहरू
बर्ड्स र एनिमल
नयाँ ज़िलेल्याण्ड रोड ट्रिप्स
हाबिल तास्मान राष्ट्रिय पार्क
फिर्डल्याण्ड राष्ट्रिय पार्क
२C घण्टा अकल्याण्डमा
WAITOMO GLOWWORM गुफाहरु
NZeTA का लागि आवेदन दिनुहोस्
Www. www.new-z Thailand-visa.co.nz द्वारा प्रतिलिपि अधिकार
अस्वीकरण: न्युजील्यान्डको ईटीए / भिसा यस वाणिज्यिक वेबसाइटबाट जारी गरिएको न्यूजीलैंडको आप्रवासन (www.immigration.govt.nz) को सरकारी वेबसाइटमा सिधा लागू हुन्छ। हामी संसारभरका ट्राभल एजेन्टहरू र यात्रुहरूलाई सहयोग प्रदान गर्दछौं। न्यूजील्याण्ड सरकारले यस वेबसाइटको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष वा एक्स्क्लुस गरीएको छैन। यस वेबसाइटमा आवेदन गर्नेहरूको लागि हाम्रो सेवाहरूको लागि पेशेवर शुल्क लिइन्छ। हाम्रो शुल्कको बारेमा थप जानकारी हाम्रोमा उपलब्ध छ हाम्रोबारे पृष्ठ।